Seed Grower Mapping: The beneficiaries of the RSSD Project
RSSD စီမံကိန်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရသူများ - မျိုးစိုက်တောင်သူ စာရင်းပြုစုခြင်း
This project envisages selection of 50 Seed growers who have the capacity of turning their seed growing intoaviable enterprise. These beneficiaries belong from4Townships and have been trained and coached in Seed Business management.
There is also an investment grant of 5000 USD matching grant to 25 seed growers who were also trained to prepare business proposals.
မြို့နယ် ၄မြို့နယ်မှ RSSD စီမံကိန်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသော မျိုးစိုက်တောင်သူ အယောက် ၅၀ အားရွေးချယ်ပြီး မျိုးစေ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပေးခဲ့သည်။ စီးပွားရေးအဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင် သည့် သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် မျိုးစိုက်တောင်သူ ၂၅ဦးအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။